TOP King & Queen - About Company
Top King & Queen's ရည်ရွယ်ချက်
&nbspဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေးကြော်ငြာများကလည်း သူ့နေရာနှင့်သူ သင့်သလိုပြုလုပ်ကြရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူနဲ့ စားသုံးသူတွေရဲ့ကြားကို တံတားလေးသဖွယ် ပြုလုပ်ပေးခြင်းပါ။ Brandတစ်ခုတည်ဆောက်ရာမှာ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန် လူပင်ပန်းမဖြစ်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ အတွေ့အကြုံနဲ့ယှဉ်ပြီး ထိုက်တန်တဲ့ အကျိူးခံစားမှုများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပါပဲ။
Top King & Queen's ယုံကြည်ချက်
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Brand အတွက် စစ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့ လိုအပ်တဲ့ Advertising လုပ်ငန်းများကို နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာနဲ့ ထိရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ Advertising လုပ်ငန်းဟာ စီးပွားရေးကြော်ငြာများအတွက်သာမကပဲ နိုင်ငံရေး ၊ လူမှု ကျန်းမာရေး စတဲ့ ကဏ္ဍများအတွက်ပါ အကျိူးရှိစွာနဲ့ ပြုလုပ်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါသည်။
&nbspမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ အခြားသော Advertising လုပ်ငန်းတွေနဲ့မတူအောင် ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ Advertising လုပ်ငန်းကို ကုန်ပစ္စည်းများကိုကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့သာမက Market တစ်ခုလုံး Development ဖြစ်လာတဲ့အထိကို အဓိကကျတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကနေ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ Marketing Deparment တစ်ခု Brand Building လုပ်နေတဲ့ ပုံစံမျိူးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင် ကုမ္ပဏီတွေက ယုံကြည်အားကိုလာအောင် ဆောင်ရွက်ပြဖို့အထိ ရည်မှန်းထားပါသည်။
No.(88/90), 7&nbspFloor, Room(6-B), (51)Street, (1)Ward, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar.
Mobile : 095049394, 09785049394
Email : powerking881@gmail.com